Oo ildheer oo foornada, Gas Generator, Reheating foornada - Yinuo
Rolling Steel Kul-foorno
oo ildheer oo foorno
Gas Heat Daaweynta foorno
Kululaynta foornada Accessories
Tallaabada U kululaynta foornada
Mid ka mid ah ton foorno oo ildheer oo foornada kululaynta gaaska
Faa'iidooyinka: oolnimada sari High, bartilmaameedyada warshadu hawada gaaraan si ay u gaaraan heerka deegaanka qaranka; gacanta ku heerkulka si buuxda automatic, sax sare gacanta ku heerkulka, haysan karaa diiwaanka heerkulka, cadaadiska iyo qaylo waayo, kor hal bil. factor ammaanka High, iyadoo noocyo kala duwan oo diiwaanka alarm qalad; Tiro yar oo nozzles, kharashyada dayactirka yar yahay. Soo koobid: ilaalinta deegaanka iyo tamarta ku badbaado, shahaadada sare ee qalabaynta, oolnimada sare, ammaan ah oo lagu kalsoonaan karo. Shirkadda Our? ...
socodka Industrial foorno ku jirase aad Customer -...
Shiinaha Factory OEM dogob socodka foornada reheating
Girgire Nooca Hot Air wareegaya Heat Daaweynta ...
1) foornada Feature dahaarka Si dhakhso ah kululeeyo ilaa foornada, isticmaalka tamarta mooyee, iyo xakameeyo dareen, saqafka, dhinac iyo derbiga dib dahaarka ansixiyeen fiber buuxa structure.To kordhiyaan xoogga jir foornada, ee hoose foornada iyo qaybo ka mid bogie leben addoonsi dhismaha la fiiloyin dab u adkaysta. Dhismaha leedahay sifooyinka soo socda: A. miisaanka Light, kaydinta kulaylka yar ningax B. Good, derbiga foornada waa low-heerkulka (dusha ka dhisan foornada kaca heerkulka o ...
Ilaalinta Deegaanka iyo Technology Co., Ltd. waxa uu ku yaalaa muuqaal qurux badan oo magaalada Xuzhou. Jiangsu sare gobolka iyo technology cusub zone horumarinta warshadaha, Warshadda daboolayaa meel ka mid ah in ka badan 70000 mitir oo laba jibbaaran, dhismaha degaanka oo ka badan 50000 melers square, hantida ma guurtada ah 100 million yuan, maamulka, xirfadle iyo lechnical iyo dhismaha alxanka shaqaalaha tayada badan 400 oo qof. Our warshad uu awood hal-abuurnimo farsamo oo xoog leh oo uu leeyahay in ka badan 10 palents of model utility iyo technology been abuurtay iwm
Maxay yihiin hababka kululaynta caadiga ah ee foornooyinka kululaynta dib-u-cusboonaysiinta
Foornada dib-u-cusbooneysiinta guud ahaan waxay ka kooban tahay qaybaha soo socda: gudaha foornada, softiweerka nidaamka qalabka, softiweerka nidaamka hawo-mareenka, nidaamka ka hortagga qiiqa, iyo nidaamka qaboojinta Dib u soo kabashada kuleylka iyo aaladda ka faa'iideysiga, iwm.
Maxay tahay in fiiro gaar ah loo yeesho hawlgalka foornada kuleylka ee birta rogaysa?
Maxay yihiin waxyaabaha gaarka ah ee ay tahay in fiiro gaar ah loo yeesho marka la isticmaalayo birta foornada kululaynta? Dad badani miyay badanaa isticmaalaan foornada kuleylka ee birta lagu rogo? Si si fiican looga hortago dad badan inay qaladaad ku sameeyaan howlaha hawlgalka, dad badan waa inay taxaddaraan Akhri maqaalka, e ...
North of Changcheng Road, park saddexaad warshadaha ee Xuzhou High-tech Zone
Ring foorno, Gaas-dabiici-foornada , Foornada Korantada ee Warshadaha , Continuous Annealing Furnace, Laba Stage Dhuxul Gasifier , Steel Hardening Furnace,